21 Zvino Jehovha akati kuna Mosesi: “Taura nevapristi, ivo vanakomana vaAroni, uti kwavari, ‘Ngaparege kuva nomunhu anozvisvibisa pakati pevanhu vake nomweya wakafa.+ 2 Asi nehama yake yomumba ine ukama hwepedyo naye, naamai vake nababa vake nomwanakomana wake nomwanasikana wake nomunun’una wake 3 nehanzvadzi yake, mhandara ine ukama hwepedyo naye, isina kumbova nomurume, angazvisvibisa nayo. 4 Ngaarege kuzvisvibisa ari pakati pevanhu vokwake nomukadzi womuridzi kuti iye azvisvibise. 5 Havafaniri kuita kuti misoro yavo ive nemiparavara,+ uye havafaniri kugera kunogumira ndebvu dzavo,+ uye havafaniri kucheka miviri yavo.+ 6 Ngavave vatsvene kuna Mwari wavo,+ havafaniri kusvibisa zita raMwari wavo,+ nokuti ndivo vanouya nezvinopiwa zvinopisirwa Jehovha nomoto, izvo zvokudya zvaMwari wavo;+ uye vanofanira kuva vatsvene.+ 7 Havafaniri kuwana pfambi+ kana kuti mukadzi akambokanganiswa; uye havafaniri kuwana+ mukadzi akarambwa+ nomurume wake, nokuti mupristi wacho mutsvene kuna Mwari wake. 8 Naizvozvo unofanira kumutsvenesa,+ nokuti ndiye anouya nezvokudya zvaMwari wako. Anofanira kuva mutsvene kwauri,+ nokuti ini Jehovha ari kukutsvenesa, ndiri mutsvene.+ 9 “‘Zvino kana mwanasikana womupristi akazvisvibisa nokuita zvechipfambi, iye ari kusvibisa baba vake. Anofanira kupiswa nomoto.+ 10 “‘Zvino uya anenge ari mupristi mukuru pakati pehama dzake, ane musoro uchadururirwa mafuta okuzodza nawo,+ akapiwa simba kuti apfeke nguo+ dzoupristi, haafaniri kurega musoro wake wakati nyangarara,+ uye haafaniri kubvarura nguo dzake.+ 11 Haafaniri kusvika pedyo nomweya chero upi zvawo wakafa.+ Haafaniri kuzvisvibisa nababa vake kana kuti amai vake. 12 Haafaniriwo kubuda munzvimbo tsvene uye kusvibisa nzvimbo tsvene yaMwari wake,+ nokuti chiratidzo chokutsaurira, iwo mafuta okuzodza nawo aMwari wake,+ ari paari. Ndini Jehovha. 13 “‘Iye anofanira kuwana mukadzi achiri mhandara.+ 14 Kana iri chirikadzi kana kuti mukadzi akarambwa uye uya akambokanganiswa, pfambi, haafaniri kuwana mumwe waivava, asi anofanira kuwana mhandara kuvanhu vokwake kuti ive mudzimai wake. 15 Haafaniri kusvibisa vana vake pakati pevanhu vokwake,+ nokuti ndini Jehovha, ari kumutsvenesa.’”+ 16 Zvino Jehovha akaramba achitaura naMosesi, achiti: 17 “Taura naAroni, uchiti, ‘Pavana vako muzvizvarwa zvavo zvose hapana murume akaremara+ angaswedera pedyo kuti auye nezvokudya zvaMwari wake.+ 18 Kana paine murume chero upi zvake akaremara, haangaswederi pedyo: bofu kana anokamhina kana ane mhino yakachekwa kana ane imwe nhengo yakarebesa,+ 19 kana murume ane tsoka yakatyoka kana ruoko rwakatyoka, 20 kana ane musana wakakombama kana akanyanyisa kuonda kana ane hosha yemaziso kana mhezi kana ane zvisasa kana ane manhu akapwanyika.+ 21 Chero murume upi zvake akaremara pavana vomupristi Aroni haangaswederi pedyo kuti auye nezvinopiwa zvinopisirwa Jehovha nomoto.+ Iye akaremara. Haangaswederi pedyo kuti auye nezvokudya zvaMwari wake.+ 22 Angadya hake zvokudya zvaMwari wake pazvinhu zvitsvenetsvene+ nepazvinhu zvitsvene.+ 23 Asi haangaswederi pedyo neketeni,+ haangaswederi pedyo neatari,+ nokuti iye akaremara;+ uye haafaniri kusvibisa nzvimbo yangu tsvene,+ nokuti ndini Jehovha ari kuvatsvenesa.’”+ 24 Naizvozvo Mosesi akataura naAroni nevanakomana vake nevanakomana vose vaIsraeri.